China OEM Hand Sanitizer orinasa sy mpanamboatra | Zhongrong
Eo ambany fitarihan'ny covid-19, Hand Sanitizer dia lasa filàntsika manokana amin'ny fiainantsika andavanandro indrindra amin'ny toerana sasany ampahibemaso toy ny sekoly, hopitaly, fivarotana lehibe, hotely, sns. Ity vokatra ity dia misy alikaola 75% izay afaka mamono coronavirus sy mikraoba hafa hiambina antsika ara-pahasalamana amin'ny fomba mahomby kokoa.
Eo ambany fitarihan'ny covid-19, Hand Sanitizer dia lasa filàntsika manokana amin'ny fiainantsika andavanandro indrindra amin'ny toerana sasany ampahibemaso toy ny sekoly, hopitaly, fivarotana lehibe, hotely, sns. Ity vokatra ity dia misy alikaola 75% izay afaka mamono coronavirus sy mikraoba hafa hiambina antsika ara-pahasalamana amin'ny fomba mahomby kokoa. Rehefa mamokatra toaka ara-nofo isika, ny vidinay dia hifaninana amin'ny kalitao avo lenta ho an'ny mpanadio tanana. Ankoatr'izay, nandalo ny fanamarinana CE, FDA ary ISO izahay. Manomboka marika izahayTECH-BIO hanaovana azy ho marika No. 1 ho an'ny famonoana otrikaretina any Shina satria manana alikaola tsara indrindra any Shina izahay. Mpitarika any Shina izahay amin'ny teknolojia etanol. Manana faritra atrikasa 500000 metatra toradroa eo amin'ny faritanin'i Hebei, Sina izahay. Ny orinasanay dia niorina tamin'ny taona 1999. Na izany aza, afaka manao ihany koa izahayOEM & ODM hanisy ny logo an'ny mpanjifa ary hanamboatra ny habetsahan'ny harato. Manantena ny ho lasa mpiara-miasa manerantany ary hahatanteraka ny toe-javatra mandresy!
Hajaina ho iray amin'ny orinasa Shinoa Avo-Teknolojia, ZhongRong Technology Corporation Ltd. (kaody tahiry: 836455) dia manam-pahaizana manokana amin'ny sehatry ny biokimia, fanafody simika fanafody, simika tsara ary angovo vaovao. Miorina amin'ny iraka "hampiroborobo ny fandrosoan'ny fiarahamonina amin'ny alàlan'ny maharitrainnovation", ny orinasa dia mifantoka amin'ny R&D, ny famokarana sy ny marketing ny etanol ary koa ny vokatra any ambony sy any ambany mandritra ny roapolo taona, ary manolo-tena ho mpamatsy mpifaninana indrindra amin'ny etanol tsy varimbazaha.
Volume volume: namboarina
tombony: Miorina amin'ny alikaola · azo antoka eo amin'ny tontolo iainana · Maimaimpoana Triclosan · Mamontsina
Use: Mba hanampiana amin'ny famongorana bakteria amin'ny hoditra izay mety hiteraka aretina sy hamandoana ny hoditra.
Direction: Asio vola kely amin'ny tanana ary kosohy mandra-pahamaina.
Warnings: Ho an'ny fampiasana ivelany irery ihany · mora mirehitra · Aza manalavitra ny hafanana sy ny lelafo ∙ Aza mifandray amin'ny maso sy ny hoditra vaky.
Akora tsy miasa: Rano voadio, Carbopol, Alikaola Isopropyl, Triethanolamine, Fragrance (namboarina).
Fampahalalana hafa: Tehirizina amin'ny toerana maina misy tombo-kase.
Previous: 50ml 75% famonoana alikaola TECH-BIO
Manaraka: 500ml Moisture Hand Sanitizer TECH-BIO